Ukufikelela simahla kubagibeli abakhubazekileyo abazii-1 ezigidigidi kuloliwe ohamba ngeTurkey | RayHaber
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraUkuhamba ngesimahla kwabakhweli abakhubazekileyo abazii-1 ezigidigidi kuLoliwe
UM. Cahit Turhan, UMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo, eqhubekeka echaza lonke inyathelo lokuphunyezwa kweProjekthi yokuFikeleleka kweeNkonzo zezoThutho zaBantu eTurkey. Ngaphakathi kwinqanaba leprojekthi, isicelo seTyibhile yeOrange siyilelwe ukunceda abantu abakhubazekileyo ukuba bafumane awona malungelo asisiseko kunye neemfuno, ukufezekisa iimfuno zabo ngendlela elula, elula kwaye nokudibanisa ngakumbi noluntu. Iphepha liya kufakwa kwisebe .. utshilo.
UTurhan ucacisile iinzame zeCandelo ukuqhubela phambili impilo yabantu abakhubazekileyo.
Imod Turduğumu mod yokuqhubekeka nokumodareyitha kwe-getiren Turkey Accessibility Projekt Yolcu kwi-getiren Turkey len, eyaphunyezwa phantsi kobuchule boMphathiswa. iinkonzo zibekwa nganye nganye.
Uluhlu lwe-2 yoLuhlu lwe-Orange Table luyilelwe ukunceda abantu abakhubazekileyo ukuba bahlangane namalungelo abo asisiseko kunye neemfuno, ukufikelela kubo ngendlela elula, elula kwaye ukudibanisa ngakumbi noluntu. UTurhan wathi kuya kuba yinto ecwangcisiweyo ukunceda abagibeli abakhubazekileyo ngaphambi nasemva kohambo ngesicelo esichaphazelekayo.
â € œTheyibhile ye-Orenji iyenziwa kwisikhululo se-13
UTurhan uthe abakhweli abanqwenela ukuxhamla kwesi sicelo baya kucofa kwikhonkco elikwiphepha abathe bathenge kulo amatikiti abo kwisikrini sokuthengisa amatikiti kwaye bangenise izicelo zabo zoncedo ngokugcwalisa iFomu lesicelo seYHelp ,. Wayethetha:
â passengers Abakhweli abadlulisela phambili izicelo zabo zoncedo kwidilesi ye-Intanethi baya kuncedwa ngamagosa kwindawo yeenkonzo zeTheyibhile ezi-Orange ngexesha lokuhamba kwabo. Kule nkqubo, umkhweli uya kuhamba kunye nabasebenzi ukuya esihlalweni kwaye isikhululo sokufika siya kuhamba kunye nabasebenzi abancedisayo ukufikelela kubo de kube ukuphuma kwesitishi. Ayinguwe wedwa kuhambo lwakho lukaloliwe ohamba ngaloUkusetyenziswa kwesicelo seTafile yeOrange, esaphunyezwa liCandelo Jikelele leTCDD kunye neTCDD zothutho ngemishini ye- “Human ™, senza uloliwe okhawulezayo kwindawo yokuqala. ÄUMÄ ± I-13 yenziwa iphile nabasebenzi bebonke be-53 kwisikhululo / sikhululo.â €
Ngalo nyaka, i-1 ibonelele ngokufikelela simahla kubagibeli abakhubazekileyo abazizigidi…
Ankara, Eryaman, Eskiþehir, Konya, Pendik, Halkalı, Ä zmit, Polatlý, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, izikhululo zeGebze ziya kunikwa inkonzo ye-Orange Table, eTurhan, YHT kwaye nazo zonke iintlobo zezixhobo zokuthuthuzela kunye nokuthuthuzela abakhweli abakhubazekileyo bathe.
Ukubonisa ukuba iindawo ezizodwa zigcinelwe abagibeli abakhubazekileyo kwiiseti ze-YHT, izindlu zangasese zabantu abakhubazekileyo, i-ramp ekhubazekileyo yokuhamba ngoololiwe, iTurhan yatsho ukuba izithuthi ezikhoyo zezithuthi kwaye kwenziwa iinzame zokwenza iimoto ezintsha zilungele ukufikelela kubahambi abakhubazekileyo. Ukwenzela ukunxibelelana nabahambi abangaboni kakuhle, abasebenzi be-20 banikwa uqeqesho lwentetho yezandla kubasebenzi be-76 emsebenzini, ngelixa abasebenzi be208 benxibelelana nomgibeli okhubazekileyo kumanqanaba ohlukeneyo kubudlelwane boluntu.
I-Turhan icacisa ukuba abancedisi abakhubazekileyo babeqashwe kwiZiko leeFowuni i-444 82 33 inombolo, ngelixa besenza iidesika zobuchule zabagibeli abakhubazekileyo ukufumana iinkonzo zetikiti lokufumana kunye nokubonisana. Uye waxela ukuba iZiko leeFowuni liyakwazi ukujonga imifanekiso kwiziko lemibuzo.
Ukukhumbuza ukuba umkhweli onomgangatho wokukhubazeka i-40 iyodwa inokuhamba simahla kwinqanaba lokukhubazeka i-50 kunye nomgibeli onzima wokukhubazeka ongaphezulu kwakhe kunye neqabane lakhe, iTurhan, I-1 yatsho ukuba bangaphezulu kwesigidi esinye abakhweli abakhubazekileyo ababonelelwa simahla.
â € œUkuhanjiswa kweposti engaboni kakuhle
I-Turhan, iHlabathi eliKhubazekileyo kunye nabaMeli boMdibano weHlabathi kude kube sekupheleni kwalo nyaka, isivumelwano se-APS Courier, i-Post Cargo kunye neMvumelwano yokuThutha i-Cargo, utshilo.
UTurhan waveza ukuba kufuneka kuthunyelwe izitulo ezihamba ngamavili kunye nezithuthi ezihombisayo kubantu abafuna izitulo ezihamba ngamavili. Wachaza ukukhanya kwakhe.
UTurhan uqaphele ukuba ezinye ii-PTTMatics ezibonelelwa yi-PTT Aþ zineebhodi ezinezitshixo ezilungele ukusetyenziswa kokungaboni kakuhle kwiibhodi zezitshixo zePTTMatiks ezithile. kwaye waphawula ukuba igama leyunithi labhalwa ngoonobumba beBraille ukuze kusetyenziswe ukungaboni kakuhle kwiiyunithi zokufumana.
â € œIaphulelo ye25 yangoku kwiinkonzo zekhebula
UTurhan ugxininise ukuba iprojekthi ye-e-Government Engel sele iphunyeziwe ukuze kusetyenziswe ngokufanelekileyo iinkonzo ze-e-Government Gate ngabantu abaphantse babe zizigidi ze-3. Kwiwebhu (www.turkiye.gov.t is), ifowuni ephathekayo (i-admin, i-iOS) kulo nyaka uphelileyo, indawo yokuva sele iqalile ukubonelela ngenkonzo kubemi abakhubazekileyo bokuva.
Ngale projekthi, i-e-Government Gate yabemi abangaboni kakuhle ngenxa yezicelo, iingcebiso kunye nezikhalazo ngqo kubameli babemi ngokuthumela kubameli babemi kukungaqondani konxibelelwano kunye nokuchaza ukuphulukana nexesha , â € œIjolise ekuphuculeni umgangatho wobomi babemi bethu abangaboniyo. IZiko lethu loNxibelelwano lweSithintelo seSimahla livulwa ngexesha leeyure ze-08.00-18.00, ngaphandle kwempelaveki nangeholide zikawonkewonke. Ubukhulu becala kwiinkonzo zeZiko loKhuseleko lwezeNtlalontle, ungalibali ipassword, Ingeniso yoLawulo lweRhafu kaMongameli weNgeniso yeNtengo, u-Ministry of Justice Criminal Record irejista kunye neNkundla yeCala Lemibuzo. kullandä ±.
I-Turhan ichaze ukuba isaphulelo se-25 sasetyenziswa kuzo zonke iintlawulo kunye nemikhankaso kuzo zonke iirhafu kunye nemikhankaso kubaxhasi abakhubazekileyo kwaye i- "5126 € izicelo zonxibelelwano ezingafakwanga zifunyenwe simahla ngeSMS. wathi yena.
Umqhubi we-IETT wokungahloniphi uMkhweli weLolcu
I-DHMİ: X I-18,7 Igidigidi Abagibeli Abasebenza Ngo-Oktobha DH
I-Target kwi-Turkish Aviation I-450 Million Passengers
Isitishi se-Konya YHT siya kubakho abagibeli abayizigidi ze-XNUM ngonyaka
Isitishi seBhasi seDenizli Evuliwe kwi-2014, i-60 iyafikelela kwiiMillion Abagibeli
Inkonzo ye-7 yeendlela eziphezulu ezinikezwe nguRhulumente we-e-X, 84,6…
Ukufikeleleka kweZibonelelo ezingabonakaliyo kuhlinzekwe kwi Konya
Ukwahlukana koThutho olunikeziweyo kwiGaziantep
I-IMM ikhubazekile kwaye ikhubazekile.
Imemorandam yokuqonda kwiGediz Junction
I-Istanbul kwisikhululo senqwelomoya i-3 amawaka kwiNyanga yokuqala ye-318 yalo Nyaka İstanbul
Iinqwelo-mafutha eziHamba ngePhepha-mvume eziSimahla e Kayseri Ücretsiz
Isivumelwano kwiZivumelwano zeeNgcaciso zoHlangano
Ulwandiso loMda weTram eRabat, iKomkhulu leMoriya…
Isikhungo socingo lweTCDD